दिलकुमारले कम्पनि छाड्नुपर्ने कारण यो रहेछ। – Korea Pati
October 29, 2019 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दिलकुमारले कम्पनि छाड्नुपर्ने कारण यो रहेछ।
दिलकुमारले कम्पनि छाड्नुपर्ने कारण यो रहेछ।(छोरा साथिसंग चाही मिलेर बस्नु है ,परदेशमा साथि शिवाय कोहि हुन्न )आज बिदाको दिन, साबिक जस्तै दिलकुमार नजिकको पार्कमा बसेर मनको लड्डु बनाउँदै हुन्छ। मानव जीवनको श्रीङ्खलालाई नियाल्दा उसलाई यस्तो लाग्छ वास्तवमा मानिस उदाउने पनि एक्लै र अस्ताउने पनि एक्लै ।आखिर साथी नै किन चाहियो र ?
तर पाँच महिनै अघि घर छोड्दा आमाले भनेको सम्झँन्छ, “छोरा,साथीसँग चाही मिलेर बस्नु है । परदेशमा साथी सिवाय कोहि हुन्न।“बाबाले उतिखेरै भनेको झलझलि छ ,”फटाहाहरुको संगत गर्दै नगर्नू,संगत अनुसारको फल।हेक्का राखेस् ।”दिल द्वबिधाको क्यानभासमा टक्क अडिन्छ ।तर फेरि उसको मन आमाले भने बमोजिमै रफ्तारिन्छ ,” हो आमा, प्रवासमा साथी बिनाको जीवन कसरी कल्पना गर्नु ? अरु जस्तोसुकै बनुन् ,आफू असल बने त भै गो नि ।आफू भलो त जगतै भलो । दिलकुमार आफ्नो मनलाई मख्ख बनाएर केहि घण्टापछि कोठा फर्कन्छ।
” ढक् ढक् ढक् “दिलकुमारले सुस्तरी ढोका ढक्ढकाउँछ।तत्काल ढोका नखोलिएपछि फेरि ढक्ढकाउँछ । खोल्दै नखोल्ने संकेत देखेपछि दिलकुमारले ढोकामाथि हात बजार्छ। प्राय सधैँ दिलकुमार कोठाभित्र पस्न सदैव उहि शैली अपनाउँछ । केही मिनेटको कुराइपछि ढोका ढक्रक्क खोलिन्छ र ढोका खोल्दिनसाथ हरि पुन यथास्थानमा बिछ्यौनामा पुग्छ।दिलकुमार सरासर आफ्नै बिस्तारामा पल्टिन्छ। यो देख्दा यस्तो लाग्छ कि मानै दुबैको पानी बाराबार छ । हरिको कृयाकलापले दिलकुमार दुई महिनायता आजित छ ।उता हरि पनि आफ्नो स्वतन्त्रतामा आँच नपुर्याउँन र कोठाको हक आधा लाग्ने बताउँदै आईरहेको छ।
हरि कुनै कुराको प्रवाह नगरी आफ्नै कुरामा लिढे ढिपी झैँ आगाडि बढेको दिलकुमार रुचाउँदैन। दैनिक आलोपालो खाना बनाउँने सहमति भएपनि केही महिनायता दिलकुमार प्राय:आफैँ बनाउँछ। कोठा आफैँ सफा गर्छ। भाडाबर्तन आफैँ माज्छ। हेर्दा यस्तो लाग्छ दिलकुमार त्यस कोठाको पहरेदार हो। तैपनि दिलकुमारलाई झिनो झन्झट लाग्दैन।
लेखमा रखिएको तस्विर समबन्धित ब्यती नभए गुगल बाट साभार गरिएको हो ।